Andrasana ny didy fampiharana : hitombo ny fanampiana omen’ny Cnaps | NewsMada
Andrasana ny didy fampiharana : hitombo ny fanampiana omen’ny Cnaps
Hiakatra avo roa heny (100%) ny fanampiana ara-tsosialy omen’ny Cnaps, toy ny volan-jaza, ny ho an’ny bevohoka, ny fanampiana ny mpitaiza kely, …. Tsy hihatra avy hatrany anefa io, fa miandry ny didim-panjakana tena hampiharana azy.
Tsapan’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps) fa tsy mifanaraka amin’ny vidim-piainana ankehitriny intsony ny fanampiana omeny ny mpikambana. Nanam-piniavana namolavola fanavaozan-dalàna amin’izany ity tahiry ity, notarihin’ny tale jeneraly (DG), Arizaka Rabekoto Raoul. Mifototra amin’ny fampiakarana ny vola fanampiana sy ny fanalefahana ny fepetra sasany hisitrahana ny zo ny fanavaozana. Araka izany, nankatoavin’ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia 3 aogositra teo, ity fanavaozana ny lalàna ity, saingy miandry ny didim-panjakana fampiharana (décret sy arrêté d’application) azy sisa.
Nampahafantarina ny tompon’andraikitry ny masoivohon’ny Cnaps manerana ny Nosy io vaovao io, ny 16-19 aogositra teo tany Ampefy.
“Miasa mba hisy vokatra”
Natao koa ny jery todika ny zava-bita sy fanamafisana ny fahaiza-manao. Singanina amin’izany ny fanavaozana ny fotodrafitrasa (trano, fitaovam-piasana maoderina) hifanaraka amin’ny toetrandro sy manamora ny fikarakarana ny mpanjifa. Toe-tsaina novolen’ny DG, Arizaka Rabekoto Raoul, ao anatin’ny mpiasa ny toe-tsaina “miasa mba hisy vokatra” amin’ny lafiny rehetra. Nampirisihina ny mpiasan’ny Cnaps hiasa any amin’ny faritra, nananganana toeram-piasana sy fonenana sahaza, sady hampiharana ny politikan’ny fanapariaham-pahefana sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny fanakaikezana ny vahoaka. Porofon’izany ny nahazoan’ny Cnaps ny amboara iraisam-pirenena miisa efatra, vokatry ny fanatsarana ny fomba fiasa, ny politika manakaiky vahoaka, toy ny fametrahana ny “Cnaps mitety vohitra”.
Eo koa ny fiaraha-miasan’ny Cnaps amin’ny Tahirimbolam-panjakana, ny banky, ny sampandraharaha ara-bola madinika na mikraofinansa (IMF), hanomezana ny fanampiana ara-tsosialy eny ifotony (volan-jaza, ho an’ny bevohoka, fisotroan-dronono, sns), isorohana ny fivezivezena sy ny fandehanana lavitra.
Sehatra iraisam-pirenena sy fanampiana ny hafa
Vokatry ny fampiasana ny teknolojia fifandraisana sy ny informatika (Tics), mifandray mivantana amin’ny foibe avokoa ny masoivoho sy ny biraon’ny Cnaps manerana ny Nosy.
Tafiditra ao anatin’ny vondron’ny miteny frantsay momba ny fitantanana ny fiahiana ara-tsosialy i Madagasikara, nanomboka ny 10 jona 2016 teo. Tanteraka izany vokatry ny ezaky ny Cnaps sy ny minisiteran’ny Asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy. Voafidy ho filoha lefitry ny fikambanana iraisam-pirenena mikasika ny fiahiana ara-tsosialy (AISS), manana foibe any Soisa, ny tale jeneralin’ny Cnaps, Arizaka Rabekoto Raoul.
Eo koa ny fanampian’ny Cnaps ny mpiara-belona, toy ny ho an’ny traboina, aterina eny amin’ny BNGRC. Fanampiana ny ankizy sembana eny amin’ny Orchidée blanche, isaky ny volana desambra. Nanolotra harato ny fikambanan’ny mpanjono any Ampefy koa ny Cnaps, nandritra ity fihaonana tany an-toerana ity.